किन देखिन्छ यस्ता डरलाग्दा सपना ? यस्तो छ कारण - Babal Khabar
एजेन्सी । सपनाको अर्थ बुझ्न सकिदैन । सपनाहरु राम्रा वा नराम्रो दुवै देखिन्छ । कहिलेकाँही डरलाग्दा सपनाहरु पनि देख्ने गरिन्छ ।
प्रसिद्ध लेखक थेरेसा चियुन्गले सपनाको अर्थको बारेमा बताएका छन् । उनले सपनालाई व्यक्तिको व्यक्तिगत वृद्धि र रचनात्मकताको संकेत भएको बताएका छन् ।
मृ’त्यु : सपनामा कसैको मृ’त्यु भएको देख्नु जीवनमा आउने परिवर्तनको संकेत हो । यसको अर्थ सपना देख्ने व्यक्तिले जीवनमा कुनै कुरालाई अ’दबि’दा भन्नुपर्ने समय आएको संकेत गर्ने थेरेसा बताउँछन् । कुनै काम, जा’गिर, घर वा सम्बन्धलाई स’माप्त गर्नुपर्ने समय आएको बुझ्न सकिन्छ ।
गर्भ’वती हुनु : यदि तपाईंले सपनामा आफू गर्भ’वती भएको देख्नुभयो भने वर्तमानमा गरिरहेको काममा सफलता प्राप्त हुँदैछ भन्ने संकेत हुनसक्छ । नयाँ कुराको सुरुवात हुँदैछ भन्ने संकेत पनि हुन सक्छ ।
जब’रज’स्ती कसैसँग सुत्नु : सपनामा कसैसँग जबर’ज’स्ती सुत्नुको अर्थ जिन्दगी वा सम्बन्धमा कुनै चिज गुमाउँदै छु भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
भीडमा ना’ङ्गो हुनु : यदि सपनामा भीडमा ना’ङ्गो भएको देखियो भने देखावटी प्रवृत्तिलाई त्या’ग्ने समय आएको भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
उचाईबाट ल’ड्न : सपनामा अग्लो ठाउँबाट ल’डेको देखियो भने जिन्दगीमा केही कुराहरु आफ्नो नियन्त्रणबाट बाहिर गएको भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
कसैले पि’छा गरेको : वास्तविक जीवनमा कसैसँग भा’गिरहेको हुनुहुन्छ भने सपनामा उक्त परिस्थितीसँग जुझि’रहेको हुनुहुन्छ । कुनै भावना वा जिम्मेवारीबाट भाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको सामना गरेर अगाडि बढ्न संकेत दिएको हुनसक्छ । यो पनि पढनुस, हामीले राति सुतेको समयमा विभिन्न किसिमका सपनाहरु देख्ने गर्दछौँ। यस्ता सपना कोही शुभ हुने गर्दछन् भने कोही अशुभ मानिने गर्दछन्।
स्वप्न शास्त्रका अनुसार शुभ सपना यस्ता हुने गर्दछन्, जुन सपनाका कारण मानिसको भाग्य चम्किने गर्दछ। आउनुहोस् जानौँ यस्ता केही सपनाःयदी सपनामा कुनै देवी देवताको दर्शन पाइन्छ भने त्यस्ता व्यक्ति भविष्यमा धनी हुने गर्दछन्। सपनामा भगवान देख्नु तपाईको जीवनमा सुख, समृद्धि र धन लाभ प्राप्त हुनु हो।
सपनामा तपाईले घरमा मुसाको भागदौड भइरहेको सपना देख्नुभयो भने यो तपाईको धनी बन्ने संकेत हो। सपनामा यदी तपाईले आफू कुनै रुखमा चढिरहेको सपना देख्नुभयो भयो तपाइलाई अचानक धन प्राप्त हुन सक्छ।यदी तपाईले सपनामा कुनै महिना नाचिरहेको देख्नुभयो भने भविष्यमा तपाई आमिर बन्ने संकेत हो।
Prevअाफ्नी प्रेमीकाको यस्तो अचम्मको बानी जब प्रेमीले थाहा पाए … प्रेमीको होस उड्यो !
nextप्रेमिकासँग ‘किस’ माग्दा ब्वाईफ्रेन्ड जेल सम्म पुग्नुपर्यो ! कसरी ? जान्नुस